Ejipta : Maneho hevitra momba ilay fanafihana tao Kairo ireo blaogera · Global Voices teny Malagasy
Ejipta : Maneho hevitra momba ilay fanafihana tao Kairo ireo blaogera
Voadika ny 27 Jolay 2018 6:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, বাংলা, Swahili, bahasa Indonesia, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Febroary 2009)
Vehivavy frantsay mpizahatany no maty ary olona hafa efa ho roapolo mahery naratra tamin'ny Alahady alina noho ny fipoahana baomba tao ivelan'ny maoske Al Hussein tao amin'ny faritra tena natao ho an'ny mpizahatany tao Khan Al Khalili, ao Kairo.
Raha toa ka niatrika ny zava-misy teny an-toerana avokoa ny rehetra, tonga dia nihetsika ihany koa ny tontolon'ny blaogy ejiptiana, nifanakalo fanavaozam-baovao, vaovao, fandalinana sy ahiahy.
Ny voalohany, nizara hafatra tao amin'ny Twitter izay nitatitra fa «toa nisy fipoahana tao amin'ny Kafe tao Al Azhar.» i Zeinobia. Minitra vitsy taorian'izay, nanohy izany tamin'ny hafatra fanamarinana i Arabawy : «Fipoahana ao amin'ny làlana el-Mashhad el-Husseini, ao Kairo.»
Voalohany nihevitra ny fisianà fifandraisana teo amin'ilay baomba sy ny lalàna miady amin'ny fampihorohoroana izay niteraka adihevitra be ary mety ho resahana amin'izao andro izao ao amin'ny parlemanta i Moftasa. Tena voatsikera mafy mihitsy ilay tolodalàna.
Tsy mbola nisy zavatra voamarina, ary mbola nandeha ny tsaho; na izany aza, niezaka ny hanangona fanavaozana avy aminà loharano maro samihafa, gazety sy fahitalavitra i Zeinobia, tao anatina famerenana famakiana gazety haingana fa feno (amin'ny teny anglisy).
Nanoratra i Arabist, izay teny akaiky teny ary naheno ireo fipoahana roa:
Maheno vaovao mikasika ny fipoahana baomba ao amin'ny Kairo Fahiny akaikin'ny Khan al-Khalili aho, toerana tena natokana ho an'ny mpizahatany. Hametraka fanavaozana rehefa hisy vaovao bebe kokoa.
Fanavaozana 1: Mitatitra ny Al Jazeera hoe 11 maty, telo Ejiptiana, telo Alemàna, 16 naratra, frantsay iray maty, mbola mila hamarinina avokoa izany rehetra izany.
Fanavaozana 2: Efa milaza sahady ireo mpikatroka fa ara-potoana tsara amin'ny firesahana ilay lalàna noho ny maha-latsaka an-katerena amin'ny volana ho avy izao ao amin'ny parlemanta izany…
Fanavaozana 3: Efatra maty (Alemana sy Frantsay), 12 naratra, olom-pirenena samihafa.
Avy eo, namoaka rohy tao amin'ny Twitter izay mankany amina sarin'ilay faritra nisy fipoahana i moftasa .
Raha toa ka voalohany nangataka ireo blaogera amin'ny Twitter mba hampiasa ny marika #cairobomb (fanamarihan'ny mpandika teny: mba hahafahana mahita tsotsotra kokoa ireo hafatra momba ilay fanafihana) i Msfour, amerikana mpila ravinahitra mipetraka ao Kairo, dia voalohany nangataka ireo blaogera mba hampiasa tenifototra manokana tao amin'ilay tranombokinà tsoratadidy an-tambajotra, Delicious i Arabwy : mba hahafahana mampiaraka ireo rohy rehefa ho amina URL mitovy (adiresy aterineto).
Voalohany nitoraka blaogy mikasika ilay trangan-javatra i Yassary Masry [amin'ny teny arabo ], Carl, Msfour, Maree, Rob, SandMonkey sy Grey wool Knickers [ amin'ny teny anglisy], na hanomezana toky ireo namany sy fianakaviany izany, na hiresahana momba ny fisian'ny fifandraisana na tsia teo amin'ilay fanafihana sy ilay lalàna miady amin'ny fampihorohoroana. Nanoratra lahatsoratra fohy izay nampifandraisany ireo trangan-javatra farany niseho tao Ejipta i Grey wool Knickers, sady niezaka ny hampifandray azy ireo amin'ilay fanafihana nitranga vao haingana:
Toy ny efa voamariky ny maro, tena tonga amin'ny fotoana mampiahiahy ity zavatra ity, raha toa ka eritreretina fa tokony haverina jerena ilay fampaharetana ny maha-tany latsaka an-katerena [amin'ny teny anglisy] (manan-kery hatramin'ny ady teo amin'ny arabo sy israeliana tamin'ny 1967, nisy fiatoana kely nandritra ny fitondran'i Sadate). Mampanantena efa taona maro izay ny fanjakan'i Moubarak [amin'ny teny anglisy] ny handany lalàna miady amin'ny fampihorohoroana hanoloana ny lalàna miaramila, ary hanome -farafahakeliny- fiarovana ireo vahoaka araka ny lalàm-panorenana ejiptiana. Ankehitriny ny fitondrana, afaka miantso ny fanaovan-dalàna momba ny maha-tany klatsaka an-katerena hanaovany izay tiany hatao, hotsiarovan'ny mpamaky eto izany, ankoatra ireo hafa maro, ny fakàna an-keriny an'i Philip Rizk sy ny fisamborana an'i Diaa Gad [amin'ny teny anglisy]. Miaraka amin'ireo ho fiovana amin'ny fitondram-panjakana amerikana sy israeliana – ary ireo vondrona mpanohitra miha-heno, mafy ary mifandray kokoa, ao amin'ny firenena sy any am-pitan'ny sisintany ao Gaza – hita fa toa lasa kirikiriana ny fitondrana miha antitra an'i Moubarak, ary tsy manana safidy hafa ankoatra ny hampihatra tetikadin'ny fihenjanana mba hitazonana ny fahefany izy. Mihevitra aho fa tokony heverina ho toy ny porofon'ny koropaka misy eo amin'ireo zana-tohatra ambonin'ity didy jadona ity ny famotsorana vao haingana ilay gadra-politika Ayman Nour. Ho amin'ny vaovao bebe kokoa mikasika ity raharaha ity, kitiho ity rohy ity, ao amin'ny tranonkalan'ny tsoratadidy delicious [amin'ny teny anglisy].
Tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity, voamarina fa tovovavy frantsay 17 taona no maty, ary olom-pirenena samihafa miisa 25 no naratra. Toa mbola aloha loatra anefa izao hahafantarana ny tomponandraikitra tamin'ilay fanafihana.
Hahita sary ao amin'ny blaogin'i Ahmed AbdelFatah isika, ary afaka manaraka ireo blaogera ejiptiana ao amin'ny Twitter eto ireo mpamaky.